Yaab, Dhacdo & Barnaamij. – Page 3 – Saafi News Somali News & Entertainment Hindi Af Soomaali Musalsal
Yaab, Dhacdo & Barnaamij.	Shirkad u balan qaaday in Lacag la’aan ku raaci doono Diyaaadooda wiil yar oo ku dhax dhashay
June 20, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Shirkad u balan qaaday in Lacag la’aan ku raaci doono Diyaaadooda wiil yar oo ku dhax dhashay
57 Views Shirkadda Diyaaradaha Jet Airways oo laga leeyahay dalka Hindiya ayaa balan qaad cajiib ah u sameysay wiil yar oo ku dhax dhashay Diyaaradooda oo kasoo duushay Boqortooyada Sacuudiga kuna soo jeeday dalka Hindiya. Qof kamid ahaa rakaabkii diyaarada saarna una tababarnaa kalkaalisinimo iyo Shaqaalaha Diyaarada ayaa caawiyay hooyo fool qabatay xili ay diyaarada dhulka ka sarraysay 10,688 mitir, waxaana lagu ...
June 19, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Gabar Muslimad aheyd oo la la’aa oo meydkeeda laga helay Gobolka Virginia
79 Views Booliska Gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa shaaciyay in xalay la helay meydka gabar Muslimad aheyd oo la afduubtay kadibna la dilay. Meydka gabadha ayaa looga tagay Masjid ku yaalla nawaaxiga Sterling. Ciidamada Booliska ayaa hadda waxaa ay gacanta ku hayaan nin 22-jir ah oo lagu magacaabo Darwin Martinez Torres, kaas oo lala xiriiriyay dilka gadhaasi. Gabadha la dilay ayaa ...
Daawo Muuqaal : Qisadii Ninkii boqolka qof dilay – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay
June 18, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Daawo Muuqaal : Qisadii Ninkii boqolka qof dilay – Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay
47 Views Diinta Islaamku waa diinta rajada. Diinteena qofku si kasta oo u albaabka rajada kama xirto. Qisada maanta ee qisooyinka uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay waa qiso ku raja galinaysa qof kasta oo xaqa Allah garan waayay.
Markab ay leeyihiin Ciidamada Mareykanka oo shil galay iyo Khasaaro ka dhashay (Daawo Sawirada)
Comments Off on Markab ay leeyihiin Ciidamada Mareykanka oo shil galay iyo Khasaaro ka dhashay (Daawo Sawirada)
55 Views Markab dagaal ay leeyihiin ciidamada Badda dalka Mareykanka ayaa galay shil kadib markii ay isku dhaceen Marakb kale oo nuuca xamuulka qaada ah, waxaana shilkan ka dhashay khasaaro soo gaaray Ciidamada Badda dalka Mareykanka. Todobo askari oo katirsan ciidamada Badda dalka Mareykanka ayaa la la’yahay nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyeen, ciidamadan ayaana la socday Marakabka lagu magacaabo USS ...
Daawo Muuqaal: Yurub Dadka iska daayee Digaaga iyo Xayawaanaadka kale oo la daaweeyo & Shirkado lagu dhagan yahay
Comments Off on Daawo Muuqaal: Yurub Dadka iska daayee Digaaga iyo Xayawaanaadka kale oo la daaweeyo & Shirkado lagu dhagan yahay
67 Views Shirkadaha ka ganacsado Digaaga iyo Ukunta ayaa inta badan waxaa baaritaano adag ku sameeyo dhaqaatiirta Xayawaanaadka gaar ahaan kuwa hubiya caafimaadka Diigaaga iyo ukunta laga ganacsado . Dowladaha qaarada Yurub ayaa dhoor jeer si toos ah ula wareegay shirkado fara badan , halka qaarkoodna la ganaaxay lacago Malaayiin Euro ah . Digaaga ama Doorada Yurub ayaa waxaa inta badan laga ...
Magaalo qadiimi ah oo leh masaajid iyo Goobo kale oo laga helay Itoobiya (Daawo Sawirro)
Comments Off on Magaalo qadiimi ah oo leh masaajid iyo Goobo kale oo laga helay Itoobiya (Daawo Sawirro)
67 Views Gogobolka Harlaa ee bariga dalka Itoobiya ayaa laga helay magaalo qadiim ah oo la iska iloobay, waxaa la aaminsan yahay in magalaadani ay qarniyo ka hor ahaan jirtay xarun ganacsi. Waxyaabaha haraagoodii la soo faagay ee dhulka hoostiisa loogu tagay waxaa ka mid ahaa masaajid dhisnaa ilaa qarnigii 12aad iyo qubuuro ay Muslimiintu dadkooda ku aasi jireen. Madaxa kooxdan culimada ...
Page 3 of 207«12345	»	102030...Last »	Design by: Saafi Films Team.